ဂီတာ ချစ်သူများအတွက် Songsterr v1.39 လာပါပီ :D – Myanmar Mobile App Edition: Myanmar | ပြည်တွင်းပြည်ပမုိုဘိုင်းသတင်းများ
Published On: Mon, Mar 18th, 2013 Android OS game များ | By သန်းထိုက် ဇော် ဂီတာ ချစ်သူများအတွက် Songsterr v1.39 လာပါပီ :D
Tags ShareAndroid OS အသုံးပြုသော user များအတွက် ဂစ်တာ တီးရမဲ. software လေးပါ မိမိတီးချင်တဲ. ဂစ်တာအမျိုးအစားပေါင်းထောင်ကျော်ရှိပီး လက်ကွက်တွေလည်းထောင်ကျော်ရှိပါတယ် ဒါပေမဲ. ကစားမယ်ဆို အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ထားမှသာကစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်တော.အရမ်းကြိုက်ပါတယ် ဒီsoftware လေးကို google play မှာဆိုရင် $4.99နဲ.၀ယ်ကစားရမှာဖြစ်ပီးတော. Myanmarmobileappမှာတော. free download ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီsoftware ထွက်တာသိပ်မကြာသေးပါဘူးး Mar 14, 2013 ကမှထွက်တာပါ
Android OS 2.1နဲ.အထက်မှာပဲကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်
shinshin83 on ImTOO iPhone Apps Transfer 1.3.1 For PcDaddy Shu on LEGO Batman: DC Super Heroes v1.1 for iPhone/Pad/Pod touchKO HTET on Sony Xperia P ကို JellyBean (Android v4.1.2) တင်၍ Root လုပ်နည်းzawgyi on Samsung galaxy S3(GTI9300) သမားများအတွက် 4.2.2 official jellybean leaked firmware ထွက်ရှိလာပါပြီ..TUN WIN on bootloader lock , unlock chacker tool Android Development